आखिर को हुन् सपनाको श्रीमान ? पढ्दा पढ्दै केटासंग भा’गेपछि यसरी सडकमा पुगेकी थिइन सपना - Nepali in Australia
January 16, 2021 autherLeaveaComment on आखिर को हुन् सपनाको श्रीमान ? पढ्दा पढ्दै केटासंग भा’गेपछि यसरी सडकमा पुगेकी थिइन सपना
चार वर्षअघि सुन्दर भविष्यको खोजीमा सदरमुकाम बेनी आएकी सपना रोका सही निर्णय लिन नसक्दा सडकमा पुगिन् । कक्षा ११ पढ्दा भा’गी विवाह गरेर बुटवल पुगेकी सपनाको वैवाहिक जीवन तीन महिना पनि टिक्न नस’केपछि घर न घा’टको भएर तीन महिना सडकमा बिताउनुपर्यो । खान पुग्दो घर र अभिभावकको साथ छाडेर बरा’लिएकी सपनाले थुप्रै रात भो’क भो’कै बि’ताइन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **